चारलेन सडक ‘आधा सकिदै, आधा उस्तै ’ « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
चारलेन सडक ‘आधा सकिदै, आधा उस्तै ’
निर्माणको काम पैसाले होइन, ठेकेदार रोकेको छ ?
काम भईरहेको वैशाख मसान्त सम्म काम सक्छौ ?
दाङ , ११ वैशाख । घोराहीको कटुवा खोला–तुलसीपुर चोक सम्म निर्माण हुनलागेको १४ सय चारलेन सडक विस्तार चार वर्षपछि झण्डै आधाउधी काम सकिदै छ । तर आधाँ सडक अझै उस्तै अवस्था छ । २०७१ भदौ ११ गतेदेखी निर्माण शुरु गरेको कान्छाराम शंकरमालि जेभीले सडक विस्तारका लागि ३ पटक म्याद थप गर्दा समेत निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको छैन । २०७४ साउन देखी निर्माण शुरु गरेको लुम्वीनी जलजला निर्माण सेवाले ३५० मिटर काम सम्पन्न अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसका कारण स्थानीयहरु आधा सडकको कामले निकै हर्षित छन । आधा सडकको कामले अझै त्रसित बनेको छन ।
आधा काम सकिनै लाग्यो, आधा ३÷४ वर्षदेखी अल्झि राखेको छ, जसले धेरै दुख दिएको बताउदै भन्नुभयो – ‘ बोल्न पनि कति बोल्ने बोलेर बन्ने रैछन । ’ सडक निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा दैनिकी कष्टकरका साथ गुज्रिरहेको उहाँको भनाई छ । आधा सडक धुलै उडे पनि छिट्टै सकिन्नै लाग्यो । आधा सडक कहिले बन्ने हो ? अझै कति सम्म धुलो खानुपर्ने हो ? सडकको धुलोले पसलका सामानहरु बिग्रिएका छन । विहान उठ्दा नाकभरी धुलो र खोक्दा खकारमा धुलो निस्किनी स्थानीयहरुको भनाई छ । जसका कारण स्वास्थ्य जोखिममा पर्दै गईरहेको छ । ‘घाँटी र रुघाखोकीको औषधी नियमित खानुपर्ने वाध्यता छ । – स्थानीय बालिका पौडेलले बताउनुभयो ।
उहाँले त्यो वाध्यतालाई कसैले पनि नदेखेको गुनासो गर्नुभयो । धुलो दिनैभरी उड्छ । तर पानी दुईतिनमा एक÷ दुई पटक हाल्छन । त्यसले के काम गर्छ ? कसरी बस्न सकिन्छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयोे । पसल होस् वा घरमा ढोक बन्द गरीबस्नुपर्ने वाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सडकको बढ्दो धुलोले माक्स प्रयोग गरी घर र पसलमा बस्न सक्ने स्थिति नभएको स्थानीय भिमप्रसाद लम्सालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘माक्सले काम गर्न छोड्यो । ’ सडकको बुर्रबुरे धुलो खादै औषधीले पचाउदै गर्नुपर्ने वाध्यता छ । ’तर सम्वन्धीत सरोकारवालाहरु त्यस बारेमा चाँसो नदिदा सडकका कारण स्वास्थ्य जटिल बन्दै गइरहेको उहाँले बताउनुभयो । खाने खाना देखी सुत्ने विस्तारा सम्ममा धुलाम्मे भएकाले सडकको पीडा र दुख थुप्रै रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘ सडकको पीडा कति सुनाउने हो र ? सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले स्थानीयहरु पीडित र त्रसित बन्दा सम्म पनि सम्वन्धीत निकायाहरु मैन रहेकाले आफुहरुले दुख भोग्नु परेको छ ।
काम नगर्ने निर्माण कम्पनी र निर्माण व्यवसायीले काम निर्माणको जिम्म दिनु र निर्माण कम्पनीले काम प्रति लापरवाही गर्नु नै स्थानीयहरुको स्वास्थ्य र सेवा प्रतिको खेलवाड रहेको उहाँको भनाइ छ । सडक निर्माणको काम निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले ढिलासुस्ती भईरहेको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाई छ । निर्माणका पटक पटक म्याद थप र आवश्यक रकमको भुक्तानी दिईसक्दा समेत निर्माण कम्पनीले काम नगरेको सडक डिभिजन कार्यालय दाङका डिभिजन प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘ सडकको काम पैसाले होइन ठेकेदारले रोकिएको छ । ’ जसका स्थानीयहरु धुलाम्मे सडक र धुलो शिकार हुनुपरेका उहाँले बताउनुभयो ।
११ करोड, ६४ लाख, १२ हजार, ६ सय ५३ रुपैया मध्ये कम्पनीले ६ करोड, १५ लाख, ५८ हजार, ९ सय, ६८ रुपैया भुक्तान दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । तर अझै काम सम्पन्न हुन नसक्दा कार्यालय अलमलमा परेका उहाँले बताउनुभयो । कान्छाराम शंकरमालि जेभीले पेटी ठेकेदार मार्फत काम गराईरहेकाले चार लेन सडक अपुरै अवस्थामा अल्झीरहेकाले उहाँले बताउनुभयो ।
तर सम्झौता तोड्नका लागि निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेकाले पेटी ठेकेदार मार्फत नभई कम्पनी आफैले यही वैशाख १० गते सम्मका लागि निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले सम्झौता तोड्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘ अब दुईदिन भित्र काम शुरु नगरे सम्झौता तोड्ने प्रक्रियामा शुरु गर्न वाध्य हुने छौ । ’ अलपत्र अवस्थामा थन्किएको चार लेन सडक विस्तारको काम वैशाख मसान्त सम्मका सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको काम तिव्रताका साथ निर्माणको सञ्चालन गरिने कान्छाराम शंकरमालि जेभीका पूर्ण तामाङले बताउनुभयो ।
निर्माणका लागि आवशइक पर्ने उपकरणहरु अबको केही दिनमै दाङ भित्र्याउने तयारी कम्पनीले गरीरहेकाले वैशाख सम्म निर्माण सम्पन्न गरी सडक डिसभजनलाई हस्तान्तरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । कम्पनीका प्रतिनिधिले निर्माणको काममा लापरवाही गरेकाले अब कम्पनीले नै आफै काम गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।